Sam Hartman Anoti Kuita Sarudzo Kunogona Kuvandudzwa paDebian Project | Linux Vakapindwa muropa
Sam Hartman Anoti Kuita Sarudzo Kunogona Kuvandudzwa muDebian Project
Isaac | | Kugoverwa, GNU/Linux, Misangano / Zviitiko / Hurukuro
Sam Hartman ndiye mutungamiri mutsva weprojekti yeDebian uyo akasarudzwa gore rino, sa isu tinotaura nezveLxA. Uye nguva pfupi mushure mekutora chinzvimbo chake chitsva munzvimbo yepamusoro peiyi purojekiti hombe, akatotaura pamusoro pezvimwe zvinhu zvingavandudzwa. Kuzvitsoropodza kwakanaka kwazvo uye ndinovimba kuti nemweya wega wega unopinda muchirongwa ichi, tinogona kuenda kumberi. Uye rimwe rematanho iwe aunogona kutora kumberi iri munzira yaunotora sarudzo.
Mutungamiriri mutsva anofunga kuti imwe ye zvinhu zvakamisa chirongwa inguva yenguva yainotora ku sarudzo, uye kuti vagadziri vanowanzo gumburwa nematurusi nemaitiro anoshandiswa. Naizvozvo, ichi chinofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvekutanga munzvimbo yako nyowani, kugadzirisa zvese izvi. Akagovanawo mamwe anecdotes nezve matangiro aakaita kushandisa Debian muna 1996 kana kuti akapinda sei muchirongwa ichi.
Nezve kuiswa kwake kana kuwanikwa muLinux nyika, anoti muna 1996 akawana Debian seLinux ine simba yaimutendera siya MBIRI. Zvino, mushure mekuita tsvagiridzo mukati memazuva ake ekoreji naKerberos, aizo shanda pane iyo MIT chirongwa uye kutora akasiyana mabasa. Aizogadzirawo kambani yekubvunza mushure mekusiya IETF, kwaive naDebian uye achishanda paMoonshot chirongwa.
Hartman parizvino achiripo kuchengeta Kerberos uye Moonshot kodhi paDebian, uye zvakare inotora hutungamiriri hweDebian Project. Nenzira, Kerberos chirongwa chakanyatso kuzivikanwa uye ini ndinofunga hachidi sumo, asi kune avo vasina kujairana neMoonshot, itekinoroji yakavakirwa pane yakavhurika IETF ABFAB standard. Moonshot, saKerberos, chirongwa chine chekuita nekuchengetedza. Izvo zvakagadzirirwa kubvumira kusangana kwemubatanidzwa kune chero basa kana sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Sam Hartman Anoti Kuita Sarudzo Kunogona Kuvandudzwa muDebian Project
Linux 5.1 yeApple uye Chrome OS inosvitsa yakakosha mitsva maficha nekuda kwekubatana kweGoogle neCollabora
GitHub Service Package Registry, yehomwe manejimendi sevhisi